China Fused Silica ntụ ọka Manufacturer na Supplier | Dinglong
Anyị na-eme ka ntụ ọka silica a na-eme site na silica dị ọcha, na-eji teknụzụ njikọ pụrụ iche iji hụ na ọ kachasị mma. Nnukwu olu kwụsie ike, mmụba volumetric dị ala na ịdị ọcha dị elu na-eme ka ọ bụrụ ihe bara uru ma na-agbanwe agbanwe. Anyị fused silica ntụ ọka dị na ma ọkọlọtọ na omenala urughuru nha na nkesa.
Ngwongwo mgbasawanye na-ekpo ọkụ na-enye nnukwu mgbochi mmiri ọkụ
A na-eji ntụ ọka Dinglong Fused Silica eme ihe n'ụdị slurry ma bụrụ otu n'ime ogo kachasị dị na ahịa. A na-eme ka ahịhịa silica anyị a gwakọtara ọnụ maka nhazi site na ogbe ka ogbe, iji nyere gị aka ịmepụta akụrụngwa nwere oke ogo. Dinglong fused silica powders bu uzo di ocha di ocha eji mee ihe na ntinye ego, tinyere ihe ndi ozo na ngwa elektrọnik. Usoro mgbanyụ ọkụ anyị na-agbanwe na-enyere aka igbochi ájá silica na-enweghị mmetọ n'oge nhazi - na-ebute ngwaahịa agwụla nke dị 99.98% dị ọcha.
Dinglong fused silica powders dị na ma ọkọlọtọ na omenala urughuru nha na nkesa, na ndị ọkachamara anyị ga-arụ ọrụ gị na-ebuli gị na ngwa. Ebe ọ bụ na ụlọ ọrụ ọ bụla nwere ihe dị iche iche a chọrọ, a na-arụkwa ihe ndị a na-emegharị silica a na-arụ ọrụ nke ọma ma nwee ike gbanwee maka mkpa ngwa ngwa. Dinglong fused silica flours dị na 2,200 lbs. (1,000 kg) tote sacks.
A na-arụpụta ihe ndị silica a na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ a kwadoro na Lianyungang, China. Anyị ejikọtara ọnụ iji hụ na njikwa zuru oke na ogo na iguzosi ike n'ezi ihe nke quartz anyị si na nke m na onye ahịa. Anyị nwere ihe karịrị afọ 30 nke ahụmịhe na ịmepụta na ịmepụta ihe quartz, ma na-arụ ọrụ iji meziwanye ihe quartz anyị na ndị ahịa anyị.
Nke gara aga: Fused Silica ntụ ntụ
Osote: Fused Silica Lump